မကမြေနပျ ဖွဈနတေဲ့ သူတှအေားလုံး သိဖို့ သူ့သဘောထားကို ပွတျသားစှာပွောလိုကျတဲ့ ခနျ့စညျသူ – Shwe Nay Chi
မကမြေနပျ ဖွဈနတေဲ့ သူတှအေားလုံး သိဖို့ သူ့သဘောထားကို ပွတျသားစှာပွောလိုကျတဲ့ ခနျ့စညျသူ
မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံး သိဖို့ သူ့သဘောထားကို ပြတ်သားစွာပြောလိုက်တဲ့ ခန့်စည်သူ
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ် ကြီးရေဥက္ကဌကြီး ခန့်စည်သူက အားလုံးသိအောင် ပြောပြီ။ရန်ကုန် ဇွန် (၆) ရက် နို င်ငံတော် စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင် စီ လက် ထက် ပထမ ဆုံး အကြိမ် ရုပ်ရုင် အစည်း အရုံး ဥက္က ဌ အဖြစ် တာဝန် ပေးခြင်းခံ လိုက် ရ သည့်
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ အနုပညာ အတိုင်း အဝန်း အချို့နဲ့၎င်းအား အားပေးနေသည့်ပရိတ်သတ်အချို့တို့အကြားလူမှုကွန်ရက်စာမျာနာများပေါ်တွင်
ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိသည် ကို တွေ့နေရပါသည်။ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌသစ် ကိုခန့်စည်သူ၏သဘောထားမှတ်ချက်များအား ကောက်နုတ်တင်ပြ လိုက် ရပါသည်။ခု ချိန်မှာ ကျွန်တော့် ကို
ဝေဖန် နေကြ မယ်ဆို တာ ကျွန်တော် ကြိုတွက်ပြီးထားပါ။ကျွန်တော်တို့ လောကအတိုင်းအဝန်းတွေ ကရော ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကရောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ပြောမယ်တာဝန်ဆိုတာ ယူချင်မှလည်း
ရချင်မှရတာ ရချင်သော်လည်း ပေးချင်မှ ပေးတာမျိုးလေဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ ပြောကြပါစေဗျာ။ကျွန်တော် ကျွမ်းတဲ့အနုပညာ ကျွန်တော်ကျင်လည်နေတဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်ပြချင်တယ် ကျွန်တော်လည်းဗျာ။နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုခက်ခဲလွန်းပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုသူငယ်စဉ်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းပြုခဲ့သလို
ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာပိုးတွေပါလာလို့ အထိုက်အလျောက်အောင်မြင်နေကြတာပဲလေဗျာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်သွားမယ်အနုပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ
မွေး ထုတ်သွားမယ်CDMနဲ့ ပတ်သက်လို့လုပ်တာနဲ့မလုပ်တာ ဘာကွာသွား လဲဆိုတော့အိပ်ရတာနဲ့အိပ်ယာပုံစံအိပ်ပျော်တာနဲ့အိပ် မပျော်တာကွာသွားတာပေါ့ဗျာ(ရယ်လျက်)တစ်ခုရှိတယ်ဗျ အနုပညာရှင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဆို အရမ်းလိုက်တယ်တစ်ရက်
နှစ်ရက်လောက်လမ်းပေါ်ထွက် ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်းပေါင်းဘယ် လောက်ရိုက်မှ ရတယ်ဆိုတဲ့ ငွေအမောက် ကို သူတို့ကောင်းကောင်းသိတလိုအခြားတစ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှင် အချင်းချင်း လည်း သိ တယ် ခု နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေ ပိုသိမှာပေါ့ကိုခန့်စည်သူရဲ့
Video မှတ်တမ်းလေး. ဆင်ဆာ မပေးပါ သဖြင့် နားလည် ပေးစေ ချင် ပါ တယ်။ပြောသွားတာလေး သဘောကျလို့ ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Crd အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ c r d
မဂျလာပါ ပရိတျသတျ ကွီးရဥေက်ကဌကွီး ခနျ့စညျသူက အားလုံးသိအောငျ ပွောပွီ။ရနျကုနျ ဇှနျ (၆) ရကျ နို ငျငံတျော စီမံ အုပျခြုပျရေးကောငျ စီ လကျ ထကျ ပထမ ဆုံး အကွိမျ ရုပျရုငျ အစညျး အရုံး ဥက်က ဌ အဖွဈ တာဝနျ ပေးခွငျးခံ လိုကျ ရ သညျ့
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူနှငျ့ ပတျသကျ၍ အနုပညာ အတိုငျး အဝနျး အခြို့နဲ့၎င်းငျးအား အားပေးနသေညျ့ပရိတျသတျအခြို့တို့အကွားလူမှုကှနျရကျစာမြာနာမြားပျေါတှငျ
ဝဖေနျမှုမြား မွငျ့တကျလကျြရှိသညျ ကို တှနေ့ရေပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ဥက်ကဌသဈ ကိုခနျ့စညျသူ၏သဘောထားမှတျခကျြမြားအား ကောကျနုတျတငျပွ လိုကျ ရပါသညျ။ခု ခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့ ကို
ဝဖေနျ နကွေ မယျဆို တာ ကြှနျတျော ကွိုတှကျပွီးထားပါ။ကြှနျတျောတို့ လောကအတိုငျးအဝနျးတှေ ကရော ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြတဲ့ ပရိတျသတျတှကေရောပေါ့ဗြာ ကြှနျတျောပွောမယျတာဝနျဆိုတာ ယူခငျြမှလညျး
ရခငျြမှရတာ ရခငျြသျောလညျး ပေးခငျြမှ ပေးတာမြိုးလဗြောဆိုတော့ဘယျလိုပဲ ပွောကွပါစဗြော။ကြှနျတျော ကြှမျးတဲ့အနုပညာ ကြှနျတျောကငျြလညျနတေဲ့လောကထဲကထဲမှာ ဆကျရှိနမေယျဆိုတာ
ကြှနျတျောပွခငျြတယျ ကြှနျတျောလညျးဗြာ။နိုငျငံသားတဈယောကျပဲ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျော မကြှမျးကငျြတဲ့နိုငျငံရေးလောကထဲ ဝငျဖို့ဆိုတာ သိပျကိုခကျခဲလှနျးပါတယျနိုငျငံရေးသမားက နိုငျငံရေးလောကထဲကိုသူငယျစဉျကတညျးက အသကျမှေးဝမျးပွုခဲ့သလို
ကြှနျတျောတို့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး ငယျစဉျကတညျးကအနုပညာပိုးတှပေါလာလို့ အထိုကျအလြောကျအောငျမွငျနကွေတာပဲလဗြော ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောအနုပညာလုပျငနျးကို ဆကျလုပျသှားမယျအနုပညာရှငျ မြိုးဆကျသဈလူငယျတှေ
မှေး ထုတျသှားမယျCDMနဲ့ ပတျသကျလို့လုပျတာနဲ့မလုပျတာ ဘာကှာသှား လဲဆိုတော့အိပျရတာနဲ့အိပျယာပုံစံအိပျပြျောတာနဲ့အိပျ မပြျောတာကှာသှားတာပေါ့ဗြာ(ရယျလကျြ)တဈခုရှိတယျဗြ အနုပညာရှငျသမားတှရေဲ့အားနညျးခကျြကငှရေမဲ့လမျးကွောငျးဆို အရမျးလိုကျတယျတဈရကျ
နှဈရကျလောကျလမျးပျေါထှကျ ဒါလေးလုပျပေးပါလို့ပွောလိုကျတာနဲ ကြှနျတျောတို့ဇာတျကောငျးပေါငျးဘယျ လောကျရိုကျမှ ရတယျဆိုတဲ့ ငှအေမောကျ ကို သူတို့ကောငျးကောငျးသိတလိုအခွားတဈဘကျမှာရှိတဲ့ အနုပညာ ရှငျ အခငျြးခငျြး လညျး သိ တယျ ခု နိုငျငံတျောလူကွီးတှေ ပိုသိမှာပေါ့ကိုခနျ့စညျသူရဲ့
Video မှတျတမျးလေး. ဆငျဆာ မပေးပါ သဖွငျ့ နားလညျ ပေးစေ ခငျြ ပါ တယျ။ပွောသှားတာလေး သဘောကလြို့ ကောကျနုတျ တငျပွလိုကျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလိုဝငျရောကျဖတျရှု့ပေးကွတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခွငျးစီတိုငျးကနျြးမာပြျောရှငျသောနရေ့ကျမြားပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာမှေးနကေ့ရြောကျတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော နနျးဆုရတီစိုး
ဖမျးဆီးခံထားရတာ (၅)လကြျောကွာမွငျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ ဇာဂနာရဲ့ ဓာတျပုံလေးတှကေို ပွနျကွညျ့ပွီး သတိရနမေိတဲ့လူရှငျတျောငှကျပြောကွျော